लेभान्टेमाथि बार्सिलोनाको सहज जित, ला लिगाको ४ सयौ खेलमा मेसीको गोल
२o७५ बैशाख १४ शुक्रबार / Friday, April 27, 2018
२o७४ पौष २४ सोमबार
काठमाडौँ । स्पेनिश ला लिगा अन्तर्गत बार्सिलोनाले सहज जित हासिल गरेको छ ।
गएराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले लेभान्टेलाई ३-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको जितमा लियोनेल मेसी, लुइस स्वरेज र पउलिन्होले एक एक गोल अग्रेका थिए ।
खेलको १२औ मिनेटमा मेसीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । मेसीले जोर्डी अल्बाको पासमा गोल हानेका थिए । त्यस्तै खेलको ३८औ मिनेटमा लुइस स्वरेजले गोल गर्दै बार्सिलोनाको अग्रतालाई दोब्बर पारेका थिए ।
पहिलो हाफमा २-० को अग्रता लिएको बार्सिलोनाले खेलको इन्जुरी समयमा मेसीको पासमा पाउलिन्होले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ३-० को सहज जित दिलाएका थिए ।
यस खेलम मेसीले बर्सिलोनाका लागि ला लिगाको ४ सयौ खेल खेल्दै ३६५औ गोल गरेका छन् । मेसीले ला लिगाको ४ सयौ खेल खेल्दा कुल १४४ गोल असिष्ट गरेका छन् । ला लिगामा मेसी भन्दा अगाडी जाभीले ५०५ र इनेष्टाले ४२७ खेल खेलेका छन् ।
त्यस्तै लुइस स्वरेजले बार्सिलोनाका लागि १३२औ गोल गरेका छन् ।
यो जित पछि बार्सिलोना १८ खेलमा ४८ अंक सहित ला लिगाको शिर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ । भने लिभान्टे १८ खेलमा १८ अंक सहित लिगको १६औ स्थानमा रहेको छ ।
एथलेटिको म्याड्रिड बराबरीमा रोकियो, उपाधि जित्न बार्सिलोनाले बराबरी खेले पुग्ने
काठमाडौँ । स्पेनिस ला लिगामा एथलेटिको म्याड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ । गएराती रियल बेटिसविरुद्ध भएको खेलमा एथलेटिको बिना कुनै गोल बराबरीमा रोकिएपछि अब बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि जित्न खेल बराबरी खेले
इनेस्टाले बार्सिलोना छोड्दै, ला लिगाले गर्यो खुलासा
काठमाडौं । बार्सिलोनाका लिजेण्ड प्ले मेकर आन्द्रे इनेस्टाले क्लब छोड्ने रिपोर्ट आएको छ । गएराती भएको कोपा डेल रेको उपाधि जिते पछि इनेस्टाले क्लब छोड्ने रिपोर्ट आएको हो । उनले यस
सोसियडाडसँग एथलेटिको पराजित, उपाधिका लागि बार्सिलोना एक जित टाढा
काठमाडौँ । स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत एथलेटिको म्याड्रिड पराजित भएको छ । गएराती भएको रियल सोसियडाडसँगको खेलमा एथलेटिको ३-० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । एथलेटिकोको पराजयको फाइदा लिगको शिर्ष
बिल्बाओसँग रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकियो, रोनाल्डोले गोल गर्दै हारबाट जोगाए
काठमाडौँ । स्पेनिस ला लिगामा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ । गएराती एथलेटिक बिल्बाओसँगको खेलमा खेलको अन्तिम समयमा गोल गर्दै म्याड्रिड हारबाट जोगिएको हो । रियल म्याड्रिडका लागि खेलको ८७औ मिनेटमा
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बैशाख २३ गते बोलाउन सरकारको सिफारिस
बर्दियाको गुलरियामा दुई करोडको लागतमा लोटस् गार्डेन रिसोर्ट संचालनमा
स्कारपियो गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको घट्नास्थलमा मृत्यु
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को बैठक काठमाडौँमा बस्दै
पढ्न जान थालेपछि सुन्तली जस्तै ठूलो मान्छे बन्छौ !
समताको ७५औ स्कुल भोजपुरमा खुल्ने
गुण्डा नाइके पुनलाई सघाउने केन्द्रीय सदस्यसहित २ जनालाई माओवादीको कारवाही
कमेडियन कपिल शर्मा डिप्रेशनमा, रिह्याब सेन्टरमा उपचार गराउदै !
डोल्पाका यार्सा पाटन जेठ १ देखि खुला हुने
कोपा जित्न अर्को औला भाच्न तयार छु – इभान राकीटिक
नेविसंघमा विवाद, २४ घन्टे अल्टिमेटम दिदै ५ उपाध्यक्षको देउवालाई ध्यानआकर्षण
बार्सिलोनाका पुर्व म्यानेजर लुइस इनरिक आर्सनल जाने !
बार्सिलोनाले लगातार चौथो पटक जित्यो कोपा डेल रेको उपाधि
जनप्रतिनिधि फलोअप : काठमाण्डौँ महानगर वडा नम्बर ६, मुख्य समस्या ढल
दुवै च्याम्पियनलाई हराएका रोमा र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगमा आज भिड्दै
आइपिएलमा डेभ्युको पर्खाइमा सन्दीप, यस्तो छ आजको सम्भावना
बार्सिलोनाले चेल्सीलाई हराउदै जित्यो युइएफए युथ लिगको उपाधि